ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Simple Present Tense အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Wh Questions (How)
Wh Questions (How) ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Wh Questions တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ How နဲ့စတဲ့မေးခွန်းပုံစံတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ How - manner How much - Price (uncountable ) How many - Quantity ( Countable) How long?- Duration How far - distance ပထမဦးစွာ How နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းအကြောင်းလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင် How နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဟာ နည်းဟန် Manner ဒါ့မှမဟုတ် နည်းလမ်း method ကိုမေးချင်တဲ့အချိန်မှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ How do you go to work? မင်းအလုပ်ကိုဘယ်လိုသွားသလဲ။ အလုပ်သွားတဲ့သူရဲ့နည်းလမ်းကိုသိချင်တာကြောင့်မေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကားနဲ့သွားတာလား၊ လမ်းလျှောက်သွားတာ လား စသဖြင့် သွားတဲ့နည်းလမ်းကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ how ကိုသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ မေးခွန်းတွေမှာ How တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ တွေ့ရနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ How much ကတော့ ရေတွက်မရတဲ့နာမ် ဈေးနူန်း (သို့) တစ်စုံတစ်ခုရဲ့ပမာဏ the amount of sthကိုသိချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ How much did you pay for the dress? ဒီဝတ်စုံအတွက်မင်းဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရလဲ။ How much does it cost? အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကျလဲ။ စသဖြင့် ဈေးနူန်း တစ်ခုတစ်ရဲ့ပမာဏကိုသိချင်တဲ့အခါမှာသုံးကြပါတယ်။ How many ကတေ့ာ ပမာဏကိုမေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ တိကျတဲ့အရေအတွက်ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်။ How many shoes did you buy? ဖိနပ်ဘယ်လောက်များများဝယ်ခဲ့လဲ။ ဒီမေးခွန်းမှာ how many နောက်က မေးချင်တဲ့အရေအတွက်တန်း ရေးတာသတိပြုရပါမယ်။ How many books did you read? စာအုပ်ဘယ်လောက်များများ မင်းဖတ်ခဲ့လဲ။ စာအုပ်ဘယ်နှစ်အုပ်လဲ၊ ဖိနပ်ဘယ်လောက်များများလဲ အရေအတွက် အတိအကျကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်။ How long ကတော့ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သက်တမ်း၊ ကာလအပိုင်းအခြားကို မေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ံHow long did it take you to travel from Dubai? ဒူဘိုင်းကနေလာဖို့မင်းအချိန်ဘယ်လောက်ယူခဲ့ရလဲ။ံHow long did it take you to finish this lesson? ဒီသင်ခန်းစာပြီးဖို့မင်းအချိန်ဘယ်လောက်ယူခဲ့ရလဲ။ How far ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကတော့ အကွာဝေးကိုသိချင်တဲ့အချိန်မှာမေးပါတယ်။ How far is the store from your house? မင်းအိမ်နဲ့ စတိုးဆိုင် ဘယ်လောက်ဝေးလဲ။ How far do you live from the airport? လေဆိပ်ကနေ ဘယ်လောက်အဝေးမှာမင်းနေလဲ။ ကောင်းပါပြီဒီနေ့လေ့လာခဲ့ကြတာကတော့ wh Q တွေထဲက How နဲ့စတဲ့မေးခွန်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Indefinite Pronouns ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Indefinite Pronouns တွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် နာမ်စားတွေဖြစ်တဲ့ I, you, he, she, it... စတဲ့နာမ်စားတွေ ပြုလုပ်သူ Sub နေရာမှာတွေ့တဲ့အခါပြုလုပ်သူနာမ်စားက တစ်ခုကိန်းဆို ကြိယာကိုလဲ တစ်ခုကိန်းပဲသုံးပြီး ပြုလုပ်သူ Sub ကအများကိန်းဆိုရင်တော့အများကိန်းအတွက်ကြိယာကိုသုံးရေးရုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မတိကျတဲ့နာမ်စားလို့ခေါ်တဲ့ Indefinite pronouns တွေမှာတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ကိန်းနာမ်စားဖြစ်သွားနိုင်သလို တစ်ခါတစ်ရံမှာလဲ အများကိန်းနာမ်စား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတွေ ပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူသွားအောင် မှားတတ်တဲ့ Indefinite pronouns ငါးခုအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ Indefinite pronouns တွေကဘာတွေလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားပါမယ်။ Indefinite pronouns တွေဆိုတာကတိကျတဲ့လူတစ်ယောက်(သို့) အရာဝတၳု (သို့) နေရာ တစ်ခုကို ရည်ညွန်းခြင်းမရှိတဲ့နာမ်စားတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ စလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင် Indefinite pronouns Singular Everybody Everyone Everything Anybody Nobody Each Every Much ဘယ်လိုမျိုး Indefinite pronouns တွေက အမြဲတမ်းတစ်ခုကိန်းအဖြစ်သုံးနိုင်လဲဆိုရင် everybody, everyone, everything, anybody, nobody, each, every, much တို့ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြောင်းတွေမှာသူတို့ကိုသုံးတဲ့အခါ Everybody is here Everyone is here Everything is fine. အလားတူပဲ Somebody is Nobody is Someone is Something is Is anybody here? Is anyone here? Nobody is here. နောက်တစ်ခါ each တို့ every တို့ much တို့ဟာလဲ တစ်ခုကိန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်ကြိယာသုံးတဲ့အခါ တစ်ခုကိန်းကြိယာတွေကိုသုံးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ everybody, everyone everything တို့တွေဟာ လူများစွာ၊အရာဝတၳုများစွာအကြောင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်ပေမယ့်အမြဲတမ်းတစ်ခုကိန်းနာမ်စားတွေအဖြစ်ရပ်တည်ကြတဲ့ indefinite pronouns တွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အမြဲတမ်း အများကိန်းအဖြစ်ရပ်တည်တဲ့နာမ်စားတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ Plural Both Several Few Many others Both are Several ဆိုတာကလဲအများကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ Several of the customers are here. A few of the customers are here. Many of the customers are here. Others are here. ဒီနာမ်စားတွေကတော့ ရိုးစင်းပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အမြဲတမ်း အများကိန်းအဖြစ်ရပ်တည်တဲ့ နာမ်စားတွေပါ။ အခုနောက်ထပ်လေ့လာကြည့်မယ့် နာမ်စားတွေကတော့ နည်းနည်းရူပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေကိုတစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ခုကိန်းအဖြစ်သုံးကြပြီးတစ်ခါတစ်လေမှာတော့ အများကိန်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ မတိကျတဲ့နာမ်စားတွေဖြစ်ပါတယ်။ Singular/Plural most all none any some အခုပြောပြထားတဲ့ Indefinite pronouns ငါးခုဟာ တစ်ခုကိန်းလဲဖြစ်နိုင်သလို အများကိန်းလဲဖြစ်နိုင်တဲ့ နာမ်စားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က တစ်ကိန်းနာမ်စားလား ၊ အများကိန်းနာမ်စားလားဆိုတာခွဲခြားချင်ရင်တော့ သူ့တို့နောက်ကပါတဲ့စကားလုံးတွေကို ကြည့်ရပါမယ်။ Most of the book is interesting. Most of the books are interesting. Most of the furniture was expensive. Most of the chairs were expensive. All of the food was delicious. All of the desserts were delicious. None of the desserts were delicious. Was any of his advice helpful? Were any of his ideas helpful? Some of the information is important. Some of the lectures are important. Most of the book ဆိုတဲ့စာကြောင်းမှာကြိယာကိုဘာကြောင့် is သုံးရတယ်ထင်ပါသလဲ။ ဒီနေရာမှာ most ဟာ singular/plural ကောနှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Most နောက်ကပါလာတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရပါမယ်။ Most နောက်မှာပါတဲ့ Book မှာ s မပါတဲ့အတွက် တစ်ခုကိန်းလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိယာကိုတစ်ခု ကိန်းသုံးတာပါ။ Most of the books မှာတော့ Most နောက်ကပါတဲ့ books မှာ s ပါနေတာကြောင့် အများကိန်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆနိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိယာ အများကိန်းသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ Indefinite pronouns တွေရဲ့နောက်က နာမ်တွေဟာ ရေတွက်ရတဲ့နာမ်လား၊ ရေတွက်မရနာမ်လား ဆိုတာကြည့်ပြီး တစ်ခုကိန်းအများကိန်းခွဲနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - furniture ဆိုတဲ့နာမ်ဟာ ရေတွက်မရတဲ့နာမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေတွက်မရတဲ့နာမ်တွေအားလုံးကိုစာကြောင်းတွေမှာ တစ်ခုကိန်းကြိယာတွေနဲ့ပဲရေးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် most of the furniture နောက်ကကြိယာကို တစ်ခုကိန်းရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Chairs ဆိုတဲ့နာမ်ကတေ့ာရေတွက်လို့ရတဲ့နာမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစာကြောင်းမှာ ကြိယာအများကိန်းသုံးလိုက် ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ ဒီနေ့လေ့လာခဲ့ကြတာကတော့ Indefinite pronouns တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
By or With ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေ အများဆုံးအမှားလုပ်မိတတ်တဲ့ by နဲ့ with ရဲ့အသုံးအနူန်းတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရင် by နဲ့ with ရဲ့ကွားခြားချက်တွေအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းနားလွယ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုစပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ I learn English by watching English movies. I learn English with watching English movies. ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကို အင်္ဂလိပ်ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လေ့လာပါသည်။ ဒီစာကြောင်းနှစ်ခုမှာ ဘယ်တစ်ခုကမှန်မယ်ထင်ပါသလဲ။ ... အပေါ်ကစာကြောင်းကအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယစာကြောင်းကတော့မှားပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုရေးတာမှားပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခဏနေရင်းရှင်းပြပေးပါမယ်။ I write withapen. I write byapen. ကျွန်တော် ဘောပင်ဖြင့်စာရေးသည်။ ဒီစာကြောင်းမှာ ဘယ်တစ်ခုကမှန်မယ်ထင်ပါသလဲ။ အပေါ်ကစာကြောင်းကအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယစာကြောင်းကတော့မှားပါတယ်။ သူတို့တွေဘာကြောင့်မှားတယ်၊ မှန်တယ်ဆိုတာရှင်းမပြခင် သူတို့ရဲ့တူညီရဲ့အရာတစ်ခုကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ by ရော with ရော စကားလုံးနှစ်ခုဟာ ဘယ်လို (How) ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့မေးတဲ့အခါမှာ ပြန်ဖြေတဲ့အနေနဲ့ သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အပေါ်ကစာကြောင်းလေးဆိုရင် How do you learn Eng? မင်းအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာလဲ။ How do you wirte? မင်းဘယ်လိုစာရေးလဲ။ ံHow do you eat dinner? I eat dinner with chopsticks. I eat dinner withafork. စသဖြင့် how နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့နှစ်ခုရဲ့တူညီချက်ပါ။ သူတို့ရဲ့ကွဲပြားချက်တွေလေ့လာကြည့်ရအောင်။ I turn off the light by pressing the button. ကျွန်တော် ခလုတ်ကိုဖိလိုက်ခြင်းအားဖြင့် မီးပိတ်လိုက်သည်။ ဒါလဲ how မေးခွန်းကိုဖြေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ How dou you turn off the light.? I keep healthy by exercising by verb... ဒီစာကြောင်းတွေမှာသတိထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် by ရဲ့နောက်မှာ pressing, exercising တို့ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။preessing ဆိုတာကလဲ press ကြိယာကလာတာပါ။ exercising ဆိုတာကလဲ exercise ကနေလာပါတယ်။ဒါကြောင့် by ရဲ့နောက်မှာ ကြိယာတွေရှိတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ by ရဲ့နောက်မှာလိုက်တဲ့ကြိယာပုံစံက ing ပုံစံလဲဖြစ်ပါတယ်။ How do you keep clean? မင်းတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဘယ်လိုလုပ်လဲ။ I keep clean by showering. ကျွန်တော် ရေချိုးခြင်းဖြင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် by နောက်မှာအမြဲလို ကြိယာလိုက်တယ်။ ကြိယာက ving ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပြောပြပေးတဲ့ by နဲ့ with အကြောင်းကိုလေ့လာရင်း သိထားရမှာက အခုပြောပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ ယေဘုံယျကျတဲ့စည်းမျဉ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘာသာစကားတို့ထုံးစံအတိုင်းချွင်းချက်မှတ်သားရမည့်အရာလေးတွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ နောက်ထပ်ဆက်လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်။ by ရဲ့နောက်မှာ nouns တွေလဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - လူ၊ နေရာနဲ့ အရာဝတၳုတွေအတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ by = communication transporation other exceptions/examples by ကိုအဓိကသုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကတော့ ဆက်သွယ်မှုတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသုံးကြပါတယ်။ I will contact you by email. ကျွန်တော် မင်းကိုအီးမေးနဲ့ဆက်သွယ်ပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ email က noun ဖြစ်ပါတယ်။ I will message you by text. I will go by bus. ကျွန်တော် ဘတ်စ်ကားနဲ့သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကျွန်မတို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သုံးကြတာတွေက buses, subways, bikes, boats, airplanes, ferries, motorcycle, taxi, buer, grab စတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပုံစံများစွာကို by နဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်။ I will go by car. I will go by boat. ဒီစာကြောင်းတွေမှာ article ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ အခုပြောပြခဲ့တာတွေကတော့ အဓိကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ with ရဲ့အသုံးပြုမှုတွေအကြောင်းကြည့်လိုက်ရအောင် with ရဲ့နောက်မှာတော့ nouns တွေပဲရေးရပါတယ်။ wih = body parts tools instrument ဥပမာ - Italiians talk with their hands. အီတလီလူမျိူးတွေက သူတို့ရဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်များနဲ့စကားပြောသည်။ I point with my fingers. ကျွန်တော်က လက်ချောင်းတွေနဲ့ညွန်ပြသည်။ I think with my brain. ကျွန်တော် ဦးနှောက်နဲ့တွေးသည်။ ဒီစာကြောင်းတွေမှာကြည့်လိုက်ရင် with ရဲ့နောက်မှာတွေ့ရတာက ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ကိရိယာတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာလဲ with နဲ့တွဲသုံးပါတယ်။ I cleaned the floor withamop. ကျွန်တော် ကြမ်းပြင်ကိုိ ကြမ်းတိုက်တံနဲ့သန့်ရှင်းသည်။ I eat dinner withafork. ကျွန်တော် ခရင်းနဲ့ညစာစားသည်။ I cook withamicrowave. I cook with pot. I cook with an oven. စသဖြင့်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိရိယာ တွေနဲ့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် with နဲ့တွဲသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Subject and Object Pronouns Object ပြုလုပ်ခံရသူဆိုတာက Receive an action (အက်ရှင်တစ်ခုခုကိုလက်ခံရရှိသူ၊ ကြိယာရဲ့ပြုခြင်းကိုခံရသူ) ဖြစ်ပါတယ်။ I , You , He , She , It , We, They – subject pronouns Me, You, Him, Her, It, us, Them – object pronous အရင်ကသင်ခန်းစာတွေမှာ ပြုလုပ်သူအစားသုံးတဲ့နာမ်စားတွေအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနေရာမှာတော့ အပြုခံရသူ နာမ်စားတွေအကြောင်းကိုပါ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ I love you ဒီစာကြောင်းမှာ ကျွန်တော်က မင်းကို ချစ်တယ်။ အိုကေ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ်။ I love I ဒါဆိုရင် တော့ စာကြောင်းကမှားသွားပါပြီ။ I ကပြုလုပ်သူနာမ်စား (ကျွန်တော်) ပြုလုပ်ခံရသူနာမ်းစား သုံးချင်ရင်တော့ Me ကိုသုံးရပါမယ်။ I love me. ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ကိုချစ်တယ်။ ဒီလိုစာကြောင်းပုံစံဖြစ်သွားပါမယ်။ Me (first person singular) ကိုယ်တိုင်နဲ့သုံးရမည့် နာမ်စားတွေမှာ I က ပြုလုပ်သူအစားသုံးသလို၊ ကိုယ်တိုင်ကပဲ ပြုလုပ်ခံရသူအနည်းကိန်းဖြစ်နေရင် Me ကိုသုံးရပါတယ်။ ဥပမာ- မြမြ မနေ့က ကျွန်တော့်ကိုမြင်ခဲ့သည်။ Mya Mya saw me yesterday. (me) ပြုလုပ်ခံရသူ နာမ်စားတစ်ခုကိန်း မြန်မာမှုပြုပြရရင်တော့ စာကြောင်းတစ်ခုခုမှာ (ကို) ပါလာရင်အဲ့ဒါဟာ အပြုခံရသူပါ။ ကျွန်တော့်ကို၊ သူမကို၊ သူ့ကို၊ သူတို့ကို၊ ကျွန်တော်တို့ကို၊ ထိုအရာကို၊ မင်းကို စသဖြင့်… Us (first person plural) ဥပမာ- ဒေ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့က ကုမ္မဏီကြီးတစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတယ်။ သင်ကျွန်တော်တို့ကို အင်တာနက်မှာရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဝါကျလေးမှာဆိုပါစို့ ကျွန်တော်တို့ကို လို့ပါလာတဲ့အတွက် ဒါဟာ အများကိန်အပြုခံရသူနာမ်စားကို ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dave and I work forabig company. You can find us on the internet. ဒီနေရာမှာ us ကိုသုံးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အများကိန်း (first person plural) အပြုခံရသူနာမ်စားသုံးချင်တဲ့အခါ us ကိုသုံးပေးရပါမယ်။ Second person singular (You) ဥပမာ- I saw you drivingacar this morning. ဒီမနက်ခင်း ကျွန်တော် မင်းကို ကားတစ်စီးမောင်းနေတာမြင်ခဲ့သည်။ This lesson will help you all to learn English. ဒီသင်ခန်းစာက မင်းတို့အားလုံးကို အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ You all လို့သုံးလိုက်တာကတော့ အများကိန်းအနေနဲ့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာကြောင်းတွေမှာ မင်းကို (You) လို့သုံးလိုက်တာဟာ အပြုခံရသူ နာမ်စားအဖြစ်သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ You ကတော့ ပြုလုပ်သူနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြုခံရသူနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မပြောင်းလဲပါဘူး။ You ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Third person singular (him, her,it) ဥပမာ- ကျွန်တော်မှာ ကားတစ်စီးရှိတယ်။ ကျွန်တော် ထိုအရာကိုိ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ I haveacar, and I brought it three years ago. ကျွန်တော် သူမကို ချစ်တယ်။ I love her. ကျွန်တော် သူ့ကို မနေ့ကိုမြင်ခဲ့သည်။ I saw him yesterday. Third person Plural (them) ဥပမာ- ကလေးတွေဒီကနေ့အရမ်းပျော်နေကြသည်။ သူတို့အမေက သူတို့ကို ပန်းခြံခေါ်သွားခဲ့သည်။ The children are happy today. Their mother took them to the park. ပြုလုပ်ခံရသူ အများကိန်းကိုပြောချင်တာဖြစ်လို့ Them လို့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီဒီနေ့လေ့လာခဲ့တာကတော့ subject and obj pronouns တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
There is and There are Usage
There is/There are Usage သင့်မှာ လက်ချောင်းဘယ်လောက်များများရှိလဲ။ သင့်မှာ မိသားစုဝင်ဘယ်လောက်များများရှိလဲ။ How many fingers are there in your body? How many family members are there? စတဲ့အရေအတွက်နဲ့ရှိသည်၊ ရှိကြသည်ကို ပြောချင်တဲ့အခါ There pattern ကိုသုံးပါတယ်။ There is (တစ်ခုကိန်း) There isabook on the table. စာအုပ်တစ်အုပ်တည်း ရှိတယ်။ စာပွဲပေါ်မှာရှိနေတယ်။ ဒါကိုပြောချင်တဲ့အခါ There is တစ်ခုကိန်း ပုံစံကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်များစွာစားပွဲပေါ်မှာရှိကြသည်။ ဒီလိုပြောချင်တယ်ဆို၇င်တော့ အများကိန်းပုံစံကိုသုံးရပါမယ်။ There are many books on the table. ဥပမာတွေဆက်လေ့လာကြည့်ကြမယ်။ There isacar in front of your house. (Singular) There are two cars in front of your house. (Plural) Negatives သူတို့တွေကို အငြင်းဝါကျပြောင်းတဲ့အခါ There isn’t any sugar in the cup. (Singular) There aren’t any pen in my bag. (Plural) နောက်တစ်ခါ အမေးပုံစံပြောင်းတဲ့အခါ Is there နဲ့ Are there ကိုရှေ့ဆုံးထုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ Verb to be ကြိယာ တွေဖြစ်တဲ့ (is, are) နဲ့အစပြုပြီးမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမေးခွန်းတွေဟာလဲသလားမေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ There isachair in the room. Is thereachair in the room? (singular) There are students near the teacher. Are there students near the teacher? (Plural) အရေအတွက်အတိအကျနဲ့မေးချင်တဲ့အခါ How much (uncountable nouns) ရေတွက်လို့မရတဲ့နာမ်တွေဖြစ်တဲ့ sugar, tea, water, love, friendship စတဲ့နာမ်တွေအတွက် အရေအတွက်၊ ဘယ်လောက်များများကိုမေးချင်တဲ့အခါ How much နဲ့သုံးပါတယ်။ How much sugar is there in the cup? There isalittle sugar in the cup. How much (countable nouns) ရေတွက်လို့ရတဲ့နာမ်တွေနဲ့အရေအတွက်ကိုမေးချင်တဲ့အခါမှာတော့ How many ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ How many books are there on the table? There are three books on the table. How many people are there in the cars? There are four people in the cars. Note, တစ်ခုကိန်းဖြစ်နေတဲ့အခါ there is, အများကိန်းဖြစ်တဲ့အခါ there are, အရေအတွက်အတိအကျမေးချင်တဲ့အခါ How much (ရေတွက်မရသောနာမ်များအတွက်သုံး) ၊ How many (ရေတွက်ရသောနာမ်များအတွက်သုံး)။
Can and Could ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာမှာအသုံးများပြီး တစ်ခါတစ်လေ အသုံးပြုဖို့ဒိဟဖြစ်တဲ့ can, could စကားလုံးတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ ဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Can ကိုတော့ လုပ်နိုင်စွမ်းကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာသုံးသလို ခွင့်ပြုချက်ပေးတဲ့အခါမှာလဲသုံးပါတယ်။ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် အတွက်သုံးတဲ့အခါ She can speak English. သူမက အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်သည်။ I can't cook. ကျွန်မ မချက်တတ်ဘူး။ Can you speack Spanish? မင်းစပိန်စကားပြောနိုင်လား။ ဒါ့အပြင် can ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အခါ may အသုံးနဲ့ဆင်ပါတယ်။ You can go. or you may go. သွားနိုင်ပါပြီ You can one of these chocolates. မင်းဒီချောကလက်တွေထဲကတစ်ခုယူနိုင်တယ်။ Could Could ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့နေရာသုံးခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက ယဉ်ကျေးတဲ့တောင်းဆိုမှု၊ ယဉ်ကျေးတဲ့အကြံပေးပြောကြားချက် ဥပမာ = သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုယ်နေတဲ့မြို့ကိုပြောင်းလာတယ်။ ဒီမြို့ရဲ့လှပတဲ့ရူခင်းတွေကို သူက မသိသေးတာမို့ ကိုယ်က ဘယ်နေရာတွေကိုသွားကြည့်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးပြောချင်တဲ့အခါ You could go to the Kantawgyi Park. မင်းကန်တော်ကြီးကိုသွားလည်ကြည့်သင့်တယ်။ You could go to the People's Park. မင်းပြည့်သူရင်ပြင်ကိုသွားကြည့်သင့်တယ်။ ဒီစာကြောင်းတွေက ယဉ်ကျေးတဲ့အကြံပြုပြောကြားချက် polite suggestions/advice ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် could ကိုသုံးနိုင်တဲ့နေရာကတော့ can ကို အတိတ်အနေနဲ့သုံးပြတာနဲ့တူပါတယ်။ can ကိုတော့ လုပ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်။ စတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေအတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့သဘောက Ability ကိုပြပါတယ်။ အတိတ်အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာတော့ could ကိုပဲရိုးရိုးသုံးပါ Before I watch this video about grammar, I couldn't understand how to use "Could". ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ခင်တုန်းက Could ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ But, now I can understand it. ဒါပေမယ့် အခုတော့ ကျွန်တော် နားလည်သွားပါတယ်။ တယ်။ အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စွမ်းရည် လုပ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းကို ပြောတဲ့အခါမှာလဲ အတိတ်ကာလအတွက် could ကိုပဲသုံးပါတယ်။ Till last year I could read without glasses. မနှစ်ကအထိ ကျွန်တော်မျက်မှန်မပါဘဲစာဖတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တတိယ အသုံးပြုနိုင်တဲ့နေရာကတော့ အနာဂတ်မှာဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အရာအချို့အတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- အပြင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရာသီဥတုက မကောင်းချင်ဘူး၊ ကောင်းကင်တွေလဲမှောင်မဲနေတယ်၊ မိုးရွာတော့မယ့် ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် I think it could rain today. ဒီနေ့မိုးရွာမယ်ထင်တယ်။ ဒါကဖြစ်နိုင်ချေကိုပြောပြတာပါ။ အနာဂတ်မှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာ အတော်များတဲ့ High possibility ရှိနေ အရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အရာတွေပြောချင်ရင် might ကိုလဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ It might rain today. ဒီနေ့မိုးရွာနိုင်တယ်။ I could go to POL for vacation. ကျွန်တော် အပန်းဖြေခရီးအတွက် ပြင်ဦးလွင်ကိုသွားကောင်းသွားမယ်။ I could go to Kalaw for vacation. ကျွန်တော်အပန်းဖြေခရီးအတွက် ကလောကိုသွားကောင်းသွားမယ်။
Where Question with Verb to be နေရာကိုမေးချင်တဲ့အခါ Where နဲ့ Verb to be ကိုသုံးပြီးဘယ်လိုမေးရမလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ အခု ကျွန်တော်ကတော့ ရုံးခန်းထဲမှာရောက်နေတာပါ။ I am in the office. မေးခွန်းက … ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေတာလဲ။ Where am I? မင်းဘယ်ရောက်နေတာလဲ။ Where are you? Wh နဲ့စတဲ့မေးခွန်းစကားလုံးတွေနဲ့ Verb to be တွေကိုသုံးပြီးမေးတဲ့အခါ Wh(Q) – Verb be- Sub ---? ဥပမာတွေလေ့လာကြည့်ရအောင် I am at work ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုမေးခွန်းလုပ်တဲ့အခါ Verb be ကိုရှေ့ပို့ပြီး သလားမေးခွန်းလဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Are you at work? Yes, I am. Jane is in the class. Is Jane in the class? Yes, she is. They are in Yangon. Are they in Yangon? Yes, they are. ဒါကတော့ အရင်ကသင်ကြားခဲ့တဲ့ပုံစံတွေအတိုင်း Verb be ကိုရှေ့ပို့ပြီးမေးခွန်းလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ (သလားမေးခွန်း) နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်ကဘယ်မှာလဲ၊ သူကဘယ်မှာလဲ၊ သတိူ့ကဘယ်မှာလဲ ကိုယ်မေးချင်တဲ့အရာတွေရဲ့နေရာကို သိချင်တဲ့အနေနဲ့မေးတဲ့အခါ Where ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ I am at work. Where are you? At work. (အတိုကောက်အဖြေ) Jane is in class. Where is Jane? In class. (အတိုကောက်အဖြေ) They are in Yangon. Where are they? In Yangon. (အတိုကောက်အဖြေ) ဥပမာတွေဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင် I’m in Yangon. Am I Yangon? (ဒါကတော့နေရာကိုပါထည့်ပြီး သလားလို့မေးရတဲ့မေးခွန်းပါ) ကိုယ်ဘယ်မှာရောက်နေလဲ၊ သူဘယ်မှာရောက်နေလဲ (နေရာ) မသိတဲ့အခါမျိုးမှာ Where နဲ့ထည့်မေးရပါတယ်။ Where am I? He is in Mandalay. Is he in Mandalay? Where is he? They are at the bank. Are they at the bank? Where are they? ဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ Where နဲ့ verb be ကိုသုံးပြီးတော့ နေရာကိုမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
To, At (Preposition)
To, At (Preposition) To - movement direction person place thing At - location place time ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ to,at ကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးတတ်အောင် ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ To ကတော့ လှုပ်ရှားမှု နဲ့ ရည်ညွန်းတဲ့ အခြေအနေတွေမှာသုံးပါတယ်။ to ကိုသုံးတဲ့အခါ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ တစ်ယောက်ဆီကိုသွားတဲ့အခါ၊ တစ်နေရာရာကိုသွားတဲ့အခါ (သို့)ဦးတည်ရာ တစ်ခုခုဆီကို ရည်ရွယ်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ at ကတော့ နေရာနဲ့အချိန်ကို ပြောချင်တဲ့သုံးပါတယ်။ မှတ်ထားမယ်ဆိုရင် to something (လှုပ်ရှားမှုပါဝင်) at somewhere (နေရာ၊အချိန်) to ကို သုံးတဲ့ပုံစံလေး နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။ to ကို လူပ်ရှားမှု (သို့) တစ်ယောက်ယောက်ဆီကို၊ နေရာတစ်ခုခုဆီကို (သို့) အရာဝတ္တုတစ်ခုခုဆီကို ပြောချင်တဲ့သုံးပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်။ ဥပမာ I talked to him. (person We went to school. (place She walked to her car. (thing ဒီစာကြောင်းတွေ မှာ သွားသည်။ လမ်းလျှောက်သွားသည်ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုပါဝင်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ဆီကို ဦးတည်ရာ (direction) တွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် go, run, fly, return, + to =place, thing go, run, fly, return တို့ဆိုတဲ့ကြိယာတွေဆို လှုပ်ရှားမှု (movement) ဖြစ်တာကြောင့်နောက်မှာနေရာတွေ နဲ့အရာဝတ္တုတွေ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ You go to school. You run to work. You fly to Mandalay. You return to somewhere. explain, send, read, write, speack + to = person (လူ) ဒီလိုကြိယာတွေဆိုရင်တော့ to ရဲ့နောက်မှာ လူတစ်ယောက် You sendaletter to someone. You read it to someone. You write to someone. You speack to someone. ဒီစာကြောင်းတွေမှာဆိုရင်တစ်ယောက်ယောက်ဆီကို စကားပြောနေ၊ စာရေနေ၊ ဖတ်နေ တယ်ဆိုတဲ့ directon (ဦးတည်ရာတွေပါဝင်နေပါတယ်။) ဒါကြောင့် to ကို လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဦးတည်ရာတွေ ပါဝင်နေတဲ့အခြေနေတွေမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ (movement ,direction) At - location place + time at ကိုတော့ နေရာနဲ့အချိန်ကို ပြောချင်တဲ့သုံးပါတယ်။ locaton and time We arrived at the airport. place , location နေရာကို ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ I wake up at6AM. အချိန်ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ stay work eat shop + at + place We stay at the hotel. I work at the head office. I eat at the restaurant. I shop at the Shopping Mall. ဒီစာကြောင်းတွေကတော့ နေရာကိုပြောချင်တဲ့အခါ at ကိုသုံးပြလိုက်တဲ့ဥပမာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ meet start + at + time Let's meet at 8 o'clock. Let's start at 8 PM. လေ့ကျင့်ခန်းလေးတူတူလုပ်ကြည့်ရအောင်။ We stayed ----- home. ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာနေခဲ့သည်။ ကွက်လပ်ရဲ့ နောက်မှာနေရာရှိနေတော့ to ဖြစ်မလား at ဖြစ်မလား။ နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် at ကိုရွေးရပါမယ်။ I spoke ----- Jack. ကျွန်တော် ဂျက်ကိုစကားပြောသည်။ ဒီစာကြောင်းမှာ ဦးတည်ရာတွေပါလာတော့ to,ဖြစ်မလား at ဖြစ်မလား။ ဦးတည်ရာပါတာကြောင့် to ကိုရွေးရပါမယ်။ She went ----- the bank. သူမ ဘဏ်ကိုသွားသည်။ ဒီစာကြောင်းမှာ လှုပ်ရှားမှုပါဝင်တဲ့အတွက် to (or) at သွားသည်က လူပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့အတွက် to ကိုရွေးရပါမယ်။ ကောင်းပါပြီဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ to, at အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Verb to be (Simple Past Tense)
Simple Past Tense and Verb to be အင်္ဂလိပ်စာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါ အတိတ်ကာလပြ ကြိယာတွေသုံးပါတယ်။မြန်မာလိုပြောဆိုတဲ့အခါ (ခဲ့သည်) ဆိုတဲ့စကားတွေဟာ အတိတ်ကာလ ကိုပြတာပဲဖြစ်ပတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာတုန်းက Verb to be (am,is,are) ပစ္စုပ္ပန် ကာလ အသုံးပုံအကြောင်းတွေသင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Verb to be ကြိယာထဲမှာ အတိတ်ကာလပြ Verb to be (was/were) အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ=ဒီနေ့ ကျွန်တော် ပျော်သည်။ မနေ့ကကျွန်တော်ပျော်ခဲ့သည်။ Today I’m happy. Yesterday I was happy. ဒီလို ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကအကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါ အတိတ်ကာလ ကိုသုံးပါတယ်။ Was/ were ကို Yesterday, Last week, last night, two days ago စတဲ့အရင်ကဖြစ်တဲ့နေ့ရက်အကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ ဥပမာ- I amateacher. I wasateacher last year. He isastudent. He wasastudent two years ago. We are in Mandalay now. We were in Mandalay yesterday. ဒီစာကြောင်းတွေမှာတော့ ပြုလုပ်သူ က တစ်ခုကိန်းဖြစ်တဲ့အခါ was ကိုသုံးပြီး အများကိန်းဖြစ်တဲ့အခါ were ကိုသုံးပါတယ်။ အငြင်းဝါကျတွေမှာသုံးချင်ရင်တော့ I wasn’tateacher last year. He wasn’tastudent two years ago. We weren’t in Mandalay yesterday. စသဖြင့် Verb to be နောက်မှာ အငြင်း (Not) ထည့်ပြီးငြင်းနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေကိုမေးခွန်းလုပ်ကြတဲ့အခါမှာလဲ အရှေ့ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ Was/Were ကိုရှေ့မှာထားပြီး မေးခွန်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Were youastudent last year? Yes, I was. No, I wasn’t. Was John with you yesterday? Yes, He was. No, He wasn’t. အတိတ်ကာလမှန်းသိသာစေတဲ့ စကားလုံးတွေကတော့ Tonight - last night This morning – yesterday morning This month - last month Today – yesterday Two years ago Five years ago